Dal cambaareyn ballaaran kala kulmay caalamka ka dib markuu bilaabay kudhaqanka Shareecada Islaamka. – Kismaayo24 News Agency
Dal cambaareyn ballaaran kala kulmay caalamka ka dib markuu bilaabay kudhaqanka Shareecada Islaamka.
by admin 2nd April 2019 061
Qaramada Midoobay ayaa maanta cambaareysay sharciga Islaamiga ah ee ku dhaqankiisa uu toddobaadkan ka hir-galayo dalka Brunei, kaasi oo ay ku qeexday “mid arxan darro ah, oo ka baxsan bani’aadannimada.”
SAWIRO:Safaarada Somaliya ee Dalka Germalka oo bilowday bixinta Basaboorka Somaliga.
DAAWO: Gudoomiyaha Aqalka Sare Somaaliya oo dhaliilay.
Dhageyso:- Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay Khilaafka Baarlamaanka iyo Xukuumadiisa
Deg-deg: Doorasho tii ugu yaabka badneyd oo Kismaayo ka dhacdey oyo Axmed Maddobe oo……………….
admin 15th August 2015 27th August 2015
Akhriso: Dowladda hindiya oo ku dhawaaqday war ay ku farxeen maxaabiista soomaliyeed ee dalka hindiya ku xiran